Fampiharana ny lalàna vahiny sy ny vahaolana momba ny fifanolanana ao UAE. Izay tokony ho fantatrao. 0000
Fampiharana ny lalàna vahiny sy ny vahaolana momba ny fifanolanana ao UAE. Izay tokony ho fantatrao.
Leave a Comment / mpisolovava, Blog, Business Law, raharaham-pitsarana, governemanta / By Sarah
Dinika fohy momba ny fampiharana ny lalàna vahiny sy Fanapahan-kevitra momba ny fifanolanana any amin'ny lapan'ny Emira Arabo Mitambatra
Ny lalàna vahiny samihafa dia mihatra amin'ireo orinasa hafa miasa ao anatin'ny faritra maro ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra (UAE). Raha mpiasa ianao na orinasam-barotra, dia takiana aminao ny fanajana ny lalàna mifehy ny asanao. Ohatra, raha mitantana orinasam-pitaterana ianao ary tsy mandoa ara-potoana ny mpiasanao, dia mety hiampangana anao amin'ny halatra karama. Ny fanontaniana mipetraka dia izao, inona avy ireo lalàna vahiny azo ampiharina ao UAE?
Ny Emira Arabo Mitambatra (Emira Arabo Mitambatra) dia nihaona tamin'ny fampandrosoana ara-toekarena an-taonany maro ary nisondrotra ho ivon-toeram-pivondronan'ny faritany lehibe, nisarika fifanakalozana lehibe sy fifampitondrana. Ny fandrosoana ara-toekarena dia nitarika ireo manam-pahaizana manokana ara-bola sy antoko hanao fifanarahana ao UAE hisafidy matetika lalàna vahiny, indrindra ny lalàna anglisy, hisolo tena ny fifandraisana manam-pahefana ary hisafidy toerana eo an-toerana na fanelanelanana ho safidy mifanohitra amin'ny raharaham-pitsarana.
Ankoatr'izay, ny firosoana amin'ny rafitra ara-dalàna an'ny UAE, toerana iraisan'ny besinimaro misy fananganana fantsom-bola malalaka ara-toekarena aseho amin'ny lalàna mifehy ny fomba amam-panao dia manan-danja lehibe, ary afa-po izahay manolotra boky torolalana fototra nefa feno ho an'ny manampy amin'ny fahazoana ny hevitra manasongadina ny fanapaha-kevitra momba ny lalàna, ny fitsarana ary ny fanaraha-maso ny raharaha any UAE.
Ny mari-pahaizana manokana miavaka dia tsy maintsy alaina eo anelanelan'ny ampahany amin'ny fanapahan-kevitry ny lalàna ivelany, ny arbitrating ary ny fitsarana. Ireto ambany ireto ny antony tokony hodinihina:
voalohany, Faritany UAE
Notantanin'ny lalàna mifehy ny governemanta sy ny Emirate ary manana fitsarana isan-karazany eo akaiky eo, antsoina hoe fitsarana UAE.
faharoa, ny faritra tsy misy toekarena, indrindra ny Dubai International Financial Center (DIFC) -
Faritra malalaka ara-toekarena ao amin'ny Emirate of Dubai izay manana paroasy mahaleo tena ao UAE, aseho amin'ny lalàna mifototra amin'ny fomban-drazana, mampihatra ny fandaminana ny lalàna sy ny lalàna mifehy ary ny raharaham-barotra ary nananganana fitsarana mahaleo tena Dubai International Center Dubai. Fitsarana.
Moa ve ny fitsarana UAE mitazona ny fanapahan-kevitra noraisin'ny antoko ho fifanarahana hampihatra lalàna vahiny?
Amin'ny ambaratonga ifotony, azo atao ny misafidy lalàna manara-maso ivelany. Na izany aza, ny fitsarana UAE dia hitazona ity fanapahan-kevitra ity amin'ny ambaratonga fa tsy manilika ny Shari'a Islamika, ny fangatahana malalaka na ny etika ny UAE, ary tsy mihodinkodina eo amin'ny olana maro samihafa ny fifandraisana eo amin'ny eritreritra fangatahana malalaka toy ny amin'ny zon'ny rem, asa, biraon'ny orinasa nirotsaka an-tsehatra, ary fifanarahana nifarana tamin'ny akoran'ny governemanta UAE.
Ankoatr'izay, ny fangatahana an-kalamanjana ataon'ny mponina iray, raha adika amin'ny Emirà Arabo Mitambatra, dia be dia be ary mampiditra, ankoatry ny zavatra hafa, ny raharahan'ny tsirairay, ny fahafahan'ny fifanakalozana, ny fanaparitahana ny harena ary ny fenitry ny fananan'ny tsirairay. ny ambaratonga izay tsy manafoana ny fandaminana fototra sy ny fenitra ifotoran'ny Shari'a Islamika ireo olana ireo. Amin'ny fotoana maharitra, na dia azo ekena aza ny lalàna vahiny, raha ny tena izy, ny matihanina ara-dalàna dia mbola miaina fahasarotana amin'ny fampiharana ny lalàna vahiny satria tsy maintsy nanaporofo ny fisian'ny sy ny votoatin'ny lalàna vahiny any amin'ny fitsarana ho olan'ny zava-misy izy ireo.
Wsatroka ve ny loza ateraky ny fanapahan-kevitry ny lalàna vahiny hisolo tena ny fifanarahana ao amin'ny faritany UAE?
Voalohany, ny antoko miantso ny lalàna vahiny dia manana enta-mavesatra amin'ny fanaporofoana fa misy sy ny votoatin'ny lalàna vahiny toy izany.
Ny antoko miantso ny lalàna vahiny dia manana enta-mavesatra amin'ny fanaporofoana fa misy sy ny votoatin'ny lalàna vahiny toy izany any amin'ny tribonaly UAE. Eritrereto fa ny antoko mampiasa ny lalàna vahiny dia tsy mampiseho ny fampiharana ny lalàna ivelany toa izany., Ny fitsarana, raha jerena ny sainy, dia azo antoka fa mampihatra ny lalàna UAE tsy miankina amin'ny fahalalana rehetra.
Faharoa, ny lalàna UAE dia hampiharina, na eo aza izany ary tsy ny lalàna vahiny voafidy.
Na izany aza Andininy 257 amin'ny kaody sivily UAE tsy voatery mandrara ny lalàna vahiny amin'ny fifanarahana, nanapa-kevitra ny fitsarana UAE fa mbola hihatra ny lalàna UAE. Ny fanapaha-kevitra dia nifototra tamin'ny vinavinany fa ny antoko dia mety tsy niraharaha ny haneho fanamafisana manintona sy lehibe ny fisian'ny lalàna vahiny na nanao tsinontsinona ny fanapahana ny fananany. Amin'ireto ohatra ireto dia tsy noraharahain'ny fitsarana Emirà Arabo Mitambatra ny fanambaran'ny antoko sy ny fanombanana ny tombotsoan'ny raharaha araka ny lalàna UAE.
Fahatelo, kalitao marobe momba ny lalàna vahiny.
Amin'ny fomba mahamenatra, tsy mipoitra ny kalitaon'ny lafiny maro amin'ny lalàna vahiny raha toa ka ampirisihina hanao arbitration ny fifanolanana, satria ny fitsarana UAE dia manao hadalana amin'ny fanomezan-dàlana ny voninahitra ao UAE. Tsy hanadihady ny tombotsoan'ny raharaha izany. Izy io dia hampihatra ny Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ho an'ny fahalalahana manerantany na ny fizotran'ny fampiharana mahomby dia ny fanelanelanana ao an-tokantrano atolotry ny Code momba ny fomba sivily UAE.
Fahefatra, tsy misy fiarovana amin'ny andraikitra
Ny fanapaha-kevitra amin'ny fampiasana lalàna vahiny amin'ny fifanarahana dia tsy miaro ny fifanarahana tsy ho tompon'andraikitra amin'ny hevi-dehibe momba ny lalàna UAE, izany indrindra ny eritreritra malalaka fangatahana malalaka. Mety hisy fitsarana UAE handroso io eritreritra io raha efa eo alohany io olana io. Ho fanampin'izany, ny fitsarana dia mety handray ny fangatahana, raha ny fitsarana mahefa no mihazakazaka amin'ny adihevitra na raha miankina amin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana ny didim-pitsarana avy any ivelany na ny voninahitra arbitral ny fitsarana mahomby. Na izany aza, ny Fitsarana DIFC dia mahatsapa lalàna vahiny ary tokony hampihatra izany amin'ny fifanolanana ankehitriny amin'ny sehatra ifotony.
Ny andininy 257 amin'ny kaody sivily UAE dia tsy mandrara ny lalàna vahiny fa ny lalàna UAE kosa dia hihatra.
Inona no atao hoe fanapahan-kevitra momba ny fifanolanana?
Ny vahaolana amin'ny fifanolanana dia fomba hafa handaminana ny fifanolanana tsy misy raharaham-pitsarana na amin'ny alàlan'ny fitsarana na fanelanelanana.
Inona moa ny fanapahan-kevitra momba ny fifanolanana forum izay azon'ny antoko ekena ara-dalàna ao UAE?
Fitsarana anatiny -
Ny fomba fiasa dia, amin'ny ankabeazany, dia misy ambaratonga telo voalohany, bid, ary cassation. Mandreraka ny fizotran'ny fitsarana.
Ny DIFC Courts no miandraikitra ny fikambanana mahaleo tena
Ny fepetra takian'ny fitoviana amin'ny fitsarana DIFC dia manana ambaratonga roa ihany; ny ohatra voalohany sy ny fitsarana ny tolotra, izay mamorona fombafomba maivana snappier ny fitsarana noho ny any amin'ny fitsarana UAE na ny Fitsarana any Dubai.
Ny DIFC dia manana ny fandaminana manokana ny lalàna momba ny varotra sy ny lalàna sivily.
Ny fanelanelanana dia sehatra tsy miankina amin'ny fitsarana amin'ny famahana ny fifanolanana izay misy ny antoko roa mipetraka eo alohan'ny mpitsara na mpitsara tsy miandany. Ny fomba fanelanelanana dia ampiasaina ao an-tokantrano na manerantany, andrim-panjakana na tsy fanarahan-dalàna, ankoatry ny olana heverina ho toy ny fangatahana misokatra aroso eo amin'ilay faritra etsy ambony.
Iza amin'ireo antoko ankehitriny no misafidy dinika fanelanelanana ao UAE?
Ny fanelanelanana dia vahaolana hafa momba ny fifanolanana (ADR) satria niaina fandrosoana goavana tao UAE. Ny UAE dia nanavao ny fomba fiasa mankany amin'ny fidirana an-tsehatra mba hahatratrarana ny fepetra manerantany sy ny fomba fanao tsara indrindra.
Dubai Center Arbitration Center (DIAC) dia orinasa miharihary ao UAE ary tena manam-pahaizana manokana, indrindra ny torolàlana aseho amin'ny Fitsipika ICC. Ny DIFC-LCIA dia fifantohana amin'ny fidirana an-tsehatra napetraka ao anatin'ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny DIFC sy ny Fitsarana iraisam-pirenena any London.